PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-25 - Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?
Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-25 - IINDABA -
ARIES: Mar 21 - Apr 21.
Uza kudinwa ngenxa yoxinizelelo olumandla emsebenzini. Cwangcisa usuku lwakho ngobunono. Qala ngemisebenzi enzima nengxamisekileyo okanye ebalulekileyo kuqala.
TAURUS: Apr 21 - May 21.
Olu lusuku apho uza kuvavanya amandla engqondo yakho. Obekhe wavela ebomini bakho okwenkanyamba, uza kuphinda abuye kwakhona ukuza kukuxelela konke ngesiqu sakho. Le ndibano iza kube ingalindelekanga.
GEMINI: May 21 - Jun 22.
Uza kothuswa kodwa uvuyiswe yimpumelelo yakho. Nakuba uziva udiniwe emva komsebenzi omkhulu, kuza kumele wenze izinto ngokukhawuleza ingakumbi xa ziquka usapho lwakho. Xa ugqibile uze uzonwabise.
CANCER: Jun 22 - Jul 23.
Ungalibala okubaluleke kakhulu ngolu suku lwanamhlanje. Ukuba kukhona obuthembise ukwenza, kubalulekile ukuba ungakulibali oku.
LEO: Jul 23 - Aug 24.
Ngolu suku lwanamhlanje uza kuthabatha indawo yakho. Yamkela kwaye uqonde ukuba nangona uninzi luza kukubona oku kwaye luncome nomsebenzi wakho, loo nto ayithethi kuthi baza kuvakalisa indlela abaziva ngayo lonke ixesha.
VIRGO: Aug 24 - Sep 23.
Uze uqaphele ngolu suku, ingakumbi ukuba kukho ubudlelwane okubo. Ukukhalaza okanye ukonyusa ilizwi kungakwenza uphulukane nalowo uncuma naye. Ukanti ukwala ukuveza iingcinga zakho kungaluncedo ekubeni uzikhusele kuxinizelelo.
LIBRA: Sep 23 - Oct 23.
Uza konwaba namhlanje ukufumana iingcebiso ezikumgangatho ophezulu, neziza kukuvulela ezinye iingcango ebomini. Olu suku luza kuphela kakuhle.
SCORPIO: Oct 23 - Nov 23.
Uza kuvuka unengqwalasela kwindlela obukeka ngayo ngenxa yokuncinane ovuke unako ebusweni bakho. Enyanisweni akakho umntu oza kuqaphela oku, kwaye akumelanga oku kubangele uhambele kude kulowo unomdla wakhe. Kuza kubanzima ukunikela intliziyo yakho emsebenzini, nto leyo iza kubangela ukuba ugqithisele kwabanye umsebenzi wakho. Oku uza kukwenza ngendlela enesidima nentlonipho.
CAPRICORN: Dec 22 - Jan 21.
Usizi oluncinane obukade ukulo, uza kude ulubone lugqitha. Uza kukhumbula iintsuku apho wawungabi nanto yakwenza, kodwa olu suku alusokuze lufaniswe nezinye iintsuku zakudala. Hambela kude kwizinto eziza kufakela amehlo.
AQUARIUS: Jan 21 - Feb 20.
Uza kuziva uvilapha namhlanje. Ukuze ke ungaqapheleki, zama ukwenza ngathi uxakekile kwaye uneembono ezintsha osebenza kuzo. Musa ukuleqa ukwabelana nabantu ngoku, cinga kwaye uphandisise ukuze wenze isigqibo esisiso.
PISCES: Feb 20 - Mar 21.
Uza kuba yimvuzemvuze luthando namhlanje. Uza kujonga ubudlelwane bakho ngelihlo elahlukileyo. Iqabane lakho ngulowo kudala uphupha ngaye ixesha elide.